Labada arrin ee uu qalday ABIY AHMED ee fashiliyey! - Caasimada Online
Home Maqaalo Labada arrin ee uu qalday ABIY AHMED ee fashiliyey!
Labada arrin ee uu qalday ABIY AHMED ee fashiliyey!
Halkani dhawr wax ba waa loo fasiran karaa oo kala ah;
2- China oo tartan kula jira USA ayaa Ethiopia aad u dhex galay, arrimahani waxa ay u eeg tahay in khilaafaadka danaha dawladaha waaweyn ay Ethiopia Maraykanku kaga hor yimid.
Isku soo wada xoori Abiy Ahmed waxa uu qalday;